About nani - Shandong Better Motor Co., Ltd
Motor nani yakazokudziridzwa kubva Motor workshop pamusoro Shandong Fada Group Corporation, raiva ezvinhu-anazvo vachida. Shandong Fada Group Corporation hwagadzwa muna 1976, iyo yaiva piyona zvigadzirwa dzinoshandisa uye Vacuum-Cleaner mugadziri mu China.
In 1980s, kambani akasuma nenyanzvi nyoro uye chakaoma vacuum kubva ELECTROSTAR kambani kubva kuGermany, vaitenga yemhando kugadzirwa akarongwa dzinotevedzana injini kubva USA, Japan uye Switzerland. Raiva boka wokutanga China iyo yakawana vakawanda kugadzirwa dzino injini.
Pashure pokudzidza uye kuchipedza kubva michina yemhando yepamusoro uye midziyo kwemakore anopfuura 10, zvinobudirira nayo yakatanga dzakatevedzana injini kuti mukuru kumanikidzwa pesin pachinzvimbo kupinza mumwe muna 1999. Muna April 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd akanga vakabudirira vakanyorwa waiva private vadyi wemari vachida. In Sep. 2005, kambani akashandura zita kuna Shandong Better Motor Co., Ltd.